के यो पुरुष प्रधान समाजले मेरो यो निर्णयलाई स्विकार गर्ला ? श्वेता खड्का – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/के यो पुरुष प्रधान समाजले मेरो यो निर्णयलाई स्विकार गर्ला ? श्वेता खड्का
के यो पुरुष प्रधान समाजले मेरो यो निर्णयलाई स्विकार गर्ला ? श्वेता खड्का
काठमाडौँ । अभिनेत्री श्वेता खड्का सोमबार विवाह बन्धनमा बाधिँदैछिन् । उनले प्रेमी विजयन्द्र सिंह रावतसँग सोमबार काठमाडौँबाट विवाह गर्दैछिन् । पति श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधन भएको करिब ६ वर्षपछि उनी विवाह बन्धनमा बाधिँन लागेकी हुन् ।
विवाह कार्डमा लेखिए अनुसार उनको विवाह गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा मंसिर २२ गते हुने भएको छ । विवाहको कार्यक्रम फरेस्ट रिसोर्टमा विहानैदेखि सुरु हुनेछ । यस्तै आइतबार श्वेताले सामाजिक सञ्जालमार्फत एक मनछुने स्टाटस लेखेकी छिन् ।
उनले लेखेकी छिन् – म: जीवनको नविन यात्रामा ??
जीवनका बिभिन्न आरोह-अवरोह , उकाली-ओराली , सुख-दु:ख अनि हाँसो-रोदनका पलहरुलाई आत्मसाथ गर्दै आज जिन्दगीको अर्को एउटा मोडमा आईपुगेकी छु । जिन्दगीको यो मोडसम्म आईपुग्दा मैले जे जस्ता पिर,ब्यथा, दु:ख अनि कष्टहरुसंग सामना गरेकी छु, त्यस भित्रको कहालीलाग्दो अनुभवहरुलाई शब्दमा बयान गर्न पनि असमर्थ छु । ‘अचानोको पिँडा खुकुरीलाई थाहा हुन्न’ भनेझैं समयको दुस्चक्रले ममाथी प्रहार गरेको अनेकन प्रहार र त्यसबाट मैले भोगेको पिंडाहरु केवल मलाई मात्र थाहा छ । **भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
अत: कोरोनाको सन्त्रासका बिच जुरेको खुशीको माहौलमा मैले मेरा धेरै मित्रहरु, गन्यमान्य ब्यक्तित्वहरु, संचारकर्मीज्युहरु लगायत मेरा आफन्तहरु समेतलाई सामेल गराउन असमर्थ हुनेछु । महामारीको यो माहौलमा सिमित ब्यक्तिहरुलाई साँक्षी राखी जीवनको नयाँ यात्रा सुरु गर्दै गर्दा तपाईंहरु सम्पूर्णले मलाई आशिर्वाद दिनुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वाश लिएकी छु ।????????????